Abakhiqizi bezimoto - i-china automobile factory & abahlinzeki
Ucingo: + 86-0755-2826 9320
UKUQOQA OKUKHULU OKUYINKINGA
FAKA UKUBUMBA NOKUNQOBA
LSR & iraba UKUQONDA
UKWENZA OKWENZIWA KWESIMBA
Ukukhiqizwa kwe-LSR & Rubber
Kuphelile ukuthengiswa komkhiqizo
Izingxenye zomshini wekhofi
Ikhava yangemuva yabalandeli
Isixhumi se-pin esingu-34 no-4
Idivayisi yokulinganisa ithempelesha
Nge-PCBA plate mount ingxenye
Ikhava engezansi ye-Control Unit ne-Charge Connector
✭ Le ngxenye yepulasitiki yingxenye eyinhloko yekhava eliphansi leControl Unit neCharge Connector.
✭Izinto ezisetshenziselwe le ngxenye yeplastiki yizinto ze-ABS ezingangeni umlilo, Le ngxenye yepulasitiki yingxenye yokubukeka komkhiqizo nengxenye ebalulekile yomhlangano. Ixhumeke ngokuqinile kugobolondo eliphakathi ngamantongomane ayisithupha ethusi, futhi idinga ukuphasa isivivinyo sokudonsa samamitha amahlanu.
✭Le nto engashisi i-ABS ifinyelele ezingeni le-V0, iqinisekisa ukuphepha nokuzinza ngesikhathi sokushaja ebhodini. Isikhunta sepulasitiki sale ngxenye yepulasitiki senziwa yisikhunta samapuleti amathathu. umgijimi obandayo endaweni emaphakathi, le nzuzo ingenza wonke umjovo womkhiqizo ngokufana futhi ungakhubazeki kalula.
✭Le sethi yomjovo isikhunta, impilo yethu yokuyila izikhathi ezingama-500,000. Ukulungiswa phakathi kwemikhiqizo kuklanyelwe ngamantongomane ethusi angaphezulu. Inathi yethusi ifakwa kwisikhunta bese iyajova. Lokhu kuqinisekisa ukuthi inathi yethusi ingalungiswa ngokuqinile engxenyeni yepulasitiki.
✭Uma unemikhiqizo efanayo, Sicela ungangabazi ukuxhumana nathi. Sizoba umlingani wakho omkhulu.
✭ Le yingxenye yepulasitiki evaliwe ngaphakathi emotweni, isebenzisa ukushisa okuphezulu namakhaza emelana namakhaza we-PA66 + 30%. Ukushisa kwemvelo okusebenzayo kwale ngxenye kuphakathi kuka -40 no +100 degrees. Iyamelana nesimo sezulu sangaphandle futhi ihlangabezana nezinga le-Volkswagen's 50185.
✭ Le ngxenye yepulasitiki iyingxenye yezihlungi zika-Oyili imishini yeplastiki evela kwikhasimende laseJalimane. Ubunzima obukhulu bale ngxenye ukuthi ukushuba kodonga lwayo kungu-0.45mm kuphela. Lesi setha sesikhunta sisebenzisa indinganiso yeHASCO. Okubalulekile kwe-Core yinsimbi eqinile engu-1.2343 (ESR).
✭ Isakhiwo sesikhunta silula, ngezakhi ezimbili ze-Becu ezifaka izakhiwo. Okokusebenza komkhiqizo yi-PA6 + 30GF, futhi ingaphezulu lidinga ukuba yi-VDI-24. Isidingo sokunemba kosayizi womkhiqizo ngu- +/- 0.05. Isikhathi sokulethwa kwesikhunta izinsuku ezingama-45, kanti umjikelezo wokujova ngamasekhondi ayi-12. Isikhunta sahlolwa kabili kuphela, futhi ikhasimende lasicela ukuthi sihlele ukuthekelisa kufektri yaseJalimane yokubumba umjovo.
✭ Uma unemikhiqizo efanayo, Sicela ungangabazi ukuxhumana nathi. Sizoba umlingani wakho omkhulu.
✭ Le yingxenye yepulasitiki ye-Angle buffer yeVolkswagen, esebenzisa ukushisa okuphezulu nokubanda okungamakhaza kwe-PA66 + 30%. Ukushisa kwemvelo okusebenzayo kwale ngxenye kuphakathi kuka -40 no +150 degrees. Iyamelana nesimo sezulu sangaphandle futhi ihlangabezana nezinga le-Volkswagen's 50185.
✭ Lo mkhiqizo usetshenziselwa isikhundla sokusekela sezingxenye zezimoto ukwenza ezinye izingxenye zemoto zizinzile futhi zithembeke. Lesi setha sesikhunta sisebenzisa indinganiso yeHASCO. Okubalulekile kwe-Core yinsimbi eqinile engu-1.2344 (ESR).
✭ Isakhiwo sesikhunta silula, ngezakhi ezimbili ze-Becu ezifaka izakhiwo. Okokusebenza komkhiqizo yi-PA6 + 30GF, futhi indawo edinga ukuba yi-VDI-21. Isidingo sokunemba kosayizi womkhiqizo ngu- +/- 0.05. Isikhathi sokulethwa kwesikhunta izinsuku ezingama-30, futhi umjikelezo wokujova ngamasekhondi angu-30. Isikhunta sisebenzisa INCOE umgijimi oshisayo kumgijimi obandayo wesango elincane. Isikhunta sahlolwa kabili kuphela, futhi ikhasimende lasicela ukuthi sihlele ukuthekelisa kufektri yaseJalimane yokubumba umjovo.
✭ Singenza zonke izinhlobo zesigqoko sesigqoko sokuzivikela njengoba ikhasimende lidinga, ikhotheshini inganikezwa ngokususelwa kumdwebo wekhasimende noma isampula. isikhunta sethu sobabili sihle ngekhwalithi futhi sinenani lentengo.
✭ Le ngxenye yepulasitiki iyingxenye yesigqoko sokuhamba ngebhayisikili esivela kumakhasimende ase-USA. Lesi setha sesikhunta sisebenzisa indinganiso yeHASCO. Okubalulekile kwe-Core yinsimbi eqinile engu-1.2343 (ESR). Isakhiwo sesikhunta silula, sinezinhlaka ezine ezizimele ezifaka izakhiwo. Okwenziwe ngomkhiqizo impahla yeplastiki ye-PP, futhi indawo edinga ukwenziwa yiPolish600. Isikhathi sokulethwa kwesikhunta siyizinsuku ezingama-45, kanti umjikelezo wokujova uyimizuzwana engama-37. Ukwakheka kwalesi sikhunta kuyinkimbinkimbi, kunezilayida ezine ezinkulu kanye namalifter amabili amakhulu. Ukukhishwa kwamukela ukukhishwa kwe-jacking okuthambekele kanye ne-push block ejection.
✭ Idizayini yokuthuthwa kwesikhunta idinga ukuhlukaniswa ngokulinganayo ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo ungapholiswa ngokufanayo. Yenza umkhiqizo uzuze usayizi wokucacisa okuphezulu nokubukeka kwekhwalithi ephezulu.
✭ Uma unemikhiqizo efanayo, sicela ukhululeke ukusivumela senze isikhunta kuwe. Ikhwalithi nensizakalo yethu yiyona ehamba phambili.
Izingxenye Zemoto Isikhunta
✭ Le ngxenye yepulasitiki iyingxenye yemoto evela kumakhasimende aseFrance. Lesi setha sesikhunta sisebenzisa indinganiso yeHASCO. Okubalulekile kwe-Core yinsimbi eqinile engu-1.2343 (ESR).
✭ Isakhiwo sesikhunta silula, sinezakhiwo ezimbili zeLift Okubalulekile komkhiqizo yi-PA66 + 30GF, futhi indawo edinga ukupholishwa # 600. Isikhunta de
Isikhathi se-livery siyizinsuku ezingama-35, kanti umjikelezo wokujova uyimizuzwana engama-32. Isikhunta savivinywa kabili kuphela, futhi ikhasimende lasicela ukuthi sihlele ukuthekelisa kufektri yaseFrance yomjovo wokubumba.
Izihlungi zika-Oyili ama-ccessories epulasitiki
✭ Imithombo yezindaba yokuhlunga eyenziwe ikhasimende ngamakhompiyutha anemigqa eminingi enziwe ngengilazi ye-fiber noma izinto zokwenziwa ezivumela ukuxhumana okuhle kakhulu namafutha we-bio nezinhlayiya zekhabhoni ezincibilikiswe emafutheni. Baqinisekisa ukusebenza kwezimoto eziphakeme kakhulu noma ngabe kwethulwa uwoyela omusha «wempilo ende», izithasiselo, uwoyela wamaminerali kanye non-amaminerali kanye nokwehla kwawo okulandelayo. Isakhiwo semidiya yesihlungi esisha nesendabuko siqinisekisa ukungena okuphezulu ngakho-ke ukulahleka kwemithwalo emincane ohlelweni lokuthambisa injini.
✭ Le ngxenye yepulasitiki iyingxenye yezihlungi zika-Oyili imishini yeplastiki evela kwikhasimende lase-Italy. Lesi setha sesikhunta sisebenzisa indinganiso yeHASCO. Okubalulekile kwe-Core yinsimbi eqinile engu-1.2344 (ESR). Isakhiwo sesikhunta silula, sinezinhlaka ezine ezizimele ezifaka izakhiwo. Okokusebenza komkhiqizo yi-PA6 + 30GF, futhi ingaphezulu lidinga ukuba yi-VDI-33. Isikhathi sokulethwa kwesikhunta izinsuku ezingama-40, kanti umjikelezo wokujova uyimizuzwana engama-38. Isikhunta sahlolwa kabili kuphela, futhi ikhasimende lasicela ukuthi sihlele ukuthekelisa kufektri yomjovo we-Italy.
ShenZhen Office: No. 1113, Hengping Dong Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen City, Isifundazwe Guangdong, China.
UWhatsapp: + 86-13316889509
Ukuqanjwa Komkhiqizo ebusweni be-COVID-19
I-COVID-19 Ngenkathi isesabekayo, izikhathi zenhlekelele ...
Abenzi besikhunta bagxila ekutholeni okulandelayo ...
Njengokuhweba okwengeziwe kweminye imboni ...
I-LSR liquid silicone mold application
I-gel silica gel isifinyeziwe njenge-LSR, ...